Manohy Ny Haratsian-Dohany Ny Fikorontanan’ny Toetrandro Tamin’ny 2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2016 7:30 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Español, Português, English
11 Novambra 2015. Niaina haintany mahatsiravina i Ethiopia noho ny fahakelezan'ny rotsak'orana indroa misesy nandritra ny oram-pahavaratra, izay midika fa olona an-tapitrisany ankehitriny no mila fanampiana. Sary avy amin'ny Vondrona Eoropeana/ECHO/Melaku Asefa. CC BY-ND 2.0
Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny sombin-dahatsoratr'i Thelma Young ho an'ny 350.org, fikambanana iray manangana ny hetsika manerantany misahana ny toetrandro, ary navoaka teto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Taona nafana ny 2015. Lohateny lehibe izany ary karazany sarotra izorana. Ao ambadik'izany lohateny izany ny tantara sy antontanisa an-tapitrisany.
2015 no taona nanombohantsika nahita mazava ny dian-tongotry ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ny hafanana tafahoatra nitranga tamin'izao tontolo izao. 2015 no nantsoina ho tongotra mby an-dakan'ny fiovan'ny toetrandro; taona voalohany nitokozihitra ambonin'ny 1°C noho ny fotoana talohan'ny nisian'ny indostria ny maripana manerantany.
Mialoha ny hitsorahantsika any amin'ny antsipirihany sarotsarotra, tranga fahitantsika matetika tamin'iny taona iny dia ny fahafahan'ny olona mifanampy. Na rivodoza matevina na tondradrano mampihoronkoditra — dia hitantsika ny olona ambony na any ambadika manampy ny hafa manodidina azy ireo. Iray amin'ny ohatra ankafizinay taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Soudelor ny vondron'olompirenena tany Saipan namela ny olona tratran'ny tadio haka malalaka rano sy zavatra tsy maintsy ilaina andavanandro tao amin-dry zareo.
Maro ireo onjan-kafanana mampanahy nitranga tamin'ny 2015, saingy vitsy no mahery toy ny any Afovoany Atsinanana tamin'ny Jolay sy Aogositra. Ny tanàna Iranian ao Bandar Mahshahr dia nandraketana tondron-kafanana 73°C (164°F). Niteraka rarintsaina fanampiny ny onjan-kafanana ho an'ny faritra maro mpialokaloka an-tapitrisa.
Niatrika hafanana tafahoatra nahatonga fahafatesan'olona mihoatra ny 2300 ihany koa i India. Tara ny fahatongavan'ny vanim-potoanan'ny orana ka nitohy niakatra maharitra loatra ny maripana. Nanaitra ny mason'izao tontolo izao ireto sary ireto :
Mandrongatra ny fahamaizan'ala
Faritra maro amin'izao tontolo izao no niatrika fahamaizan'ala midadasika tamin'iny taona iny. Tany Canada, fahamaizan'ala 6000 manana velarana mitovy amin'i Sisily [Nosy atsimon'i Italia]. Niatrika ny iray amin'ny fahamaizan'ala nandravarava indrindra hatramin'ny 1960 i Etazonia, fa mihoatra ny 4,5 tapitrisa hekitara no may tamin'izany (velarantanin'i Danimarka izany). An'arivony ny olona nafindra toerana hiala amin'ny tranony.
Maro loatra ny tadio mahery tsy tahaka ny mahazatra
Any amin'ny ilabolantany avaratra, dia maro ny rivodoza, tadio ary rambondanitra nanamontsana ny heriny teo aloha — 22 amin'ny sokajy faha-4 na tadio henjana dia henjana 5 ny totaliny. Ny faratampony teo aloha dia 18. Jereo ato ny lisitra feno.
Ohatra, nihanahazo hery haingana ny Rivodoza Patricia ary lasa tadio mahery indrindra voarakitra any amin'ny ilabolantany andrefana.
Tahaka izany ny feon'ny rivodoza mahery indrindra vorakitra hatramin'izay. Sary avy any Melaque, Jalisco
Manampy trotraka ny El Niño
Ny 90-95%-n'ny hafanana avy amin'ny fikorontanan'ny toetrandro dia lasa any amin'ny ranomasimben'izao tontolo izao ka mahatonga ny El Niño 2015-2016 El ho ratsy indrindra hatramin'izay. Michel Jarraud, sekretera-jeneralin'ny Fikambanana Manerantanin'ny Famantarana ny Toetrandro, niteny hoe, “Milalao amin'ny kianja tsy mbola nodiavina ity El Niño ity. Efa simba dia simba tokoa ny planetantsika noho ny fikorontanan'ny toetrandro.”
Efa niteraka haintany henjana dia henjana tany Papoà Ginea Vaovao sy Afrika Atsinanana izy io, sy tondradrano henjana dia henjana manerana izao tontolo izao – any Paragoay, Bolivia ary Chennai, India. Fantaro bebe kokoa ny fiantraikany ato.
Tanàna iray sy firenena dimy no efa nanambara fa nampihatra ny fahamehana noho ny El Niño mandalo amin'izao fotoana izao, raha nametraka fitaovana hiatrehana ny fahamehana tamin'ny firenena folo fanampiny ny Firenena Mikanbana. Sarintany: 350.org
Mafana kokoa hatraiza?
Tsy fe nafana fotsiny ny taona 2015 fa mafana lavidavitra kokoa. Nitatitra ny NASA, “Amin'ny ankapobeny ny maripana ankapobeny tamin'ny 2015 dia nanamontsana ny marika teo aloha tamin'ny 2014 hatramin'ny 0,23 degre Fahrenheit (0,13 Celsius). Indray mandeha ihany taloha, tamin'ny 1998, no nahitana faratampony vaovao ambony lavidavitra noho ny teo aloha tahaka izao.”
Taona 15 amin'ny taona 16 nafana indrindra voarakitra hatramin'izao dia nitranga hatramin'ny 2001 avokoa. © Scientific Visualization Studio/Goddard Space Flight Center